30.6.2011 မန်းတလေး သတင်း ဖြေရှင်းချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » 30.6.2011 မန်းတလေး သတင်း ဖြေရှင်းချက်
30.6.2011 မန်းတလေး သတင်း ဖြေရှင်းချက်
Posted by မောင် ပေ on Jul 4, 2011 in News | 12 comments
အထက (၁) အမျိုးသား ကျောင်း အတွင်း အသီးဖျော်ရည် ၊ အအေး ရောင်းသော အအေးသည်ကြီး သည် သူ့ အအေးဆိုင် တွင် အသုံးပြု ဖို့ ရေခပ်ရန် အလို့ ငှါ ၊ ရေပုံးကလေး ကို ဆွဲ ကာ ကျောင်းအပြင်ဘက် ရှိ ရေတွင်းဆီသို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။ ရေခပ်ပြီး ကျောင်းထဲသို့ ပြန်ဝင်မည် အလုပ် ၊ ၂ထပ် ကျောင်းဆောင် ပေါ်ရှိ ခပ်နောက်နောက် ကျောင်းသားလေး များ၏ ကျယ်လောင်စွာ ပြိုင်တူ အော်ဟစ်သံ ကို ကြားလိုက်ရသည် ။
“ ဗုံး…ဗုံးဗျို့… အအေးသည်ကြီး ယူလာတာ၊ ဟို အအေးသည်ကြီး ယူလာတာ ဗုံးကြီးပါဗျို့။ ”
ထိုအော်ဟစ်သံ များ ကို နားစွံ နားဖျား ကြားသွားသော ကျောင်းရှေ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူ တစ်ဦးသည် စိုးရိမ်စိတ်ပူ စွာ ဖြင့် 199 သို့ ဖုန်းဆက် လိုက်လေတော့သည် ။ အလားတူ ကျောင်းသားလေး များ ၏ အော်ဟစ်သံ ကို ကြားသွားသော ၊ ထိုလမ်းပေါ်မှာ ဖြတ်သွားသူ အချို့ သည်လည်း သုတ်သုတ် နှင့် ပြေးသွားကြရာမှ ရောက်လေရာ အရပ်တွင် ကျောင်းရှေ့ မှာ ဗုံးတွေ့ လို့ တဲ့ဗျို့ ဟု လည်းကောင်း ကျောင်းရှေ့ မှာ ဗုံးကွဲလို့ တဲ့ ဟု လည်းကောင်း သတင်းဖြန့် ကြလေတော့သည် ။
199 ကို ဖုန်းဆက် သည့် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များ က ချက်ချင်း ရောက်လာသည် ။ အသံကြား သတင်းပြန်လွှင့်သူ တို့ ၏ စကားကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိသော ကျောင်းသား မိဘ များသည် လည်း အထက (၁) ကျောင်း ဆီသို့ အပြေးအလွှား ရောက်လာကြလေတော့သည် ။
အားလုံး ဆုံမိကြတော့မှ ရေပုံးကလေး ကိုင် ကာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသာ အအေးသည် ကို လည်းကောင်း ၊ ပါးစပ်သရမ်း သော ကျောင်းသား များ ၏ အဖြစ်ကို လည်းကောင်း ငိုအားသန် ရယ်အားသန် တွေ့ ကြရလေတော့သည် ။ ထိုအခါ မှ စိတ်အေး သွားကြလေသတည်း ။
( အထက ၁ ကျောင်းသည် အမျိုးသားသီးသန့် ကျောင်းဖြစ်သည် ။ မန်းတလေးမြို့ အောင်မြေသာဇံ ရပ်ကွက် 24 လမ်းx81 လမ်းထောင့် တွင် တည်ရှိသည် )
ကျောင်းသား ငပြောင်တွေနဲ့သွားတွေ့ တာပဲ..
ဒီမှာလဲ ဂမုန်းပွင့်ဗုံးပေါက်တယ် ဆိုပြီး..
ဟုတ်လဲဟုတ်ဘူး..မြေနီကုန်း၊ဂမုန်းပွင့်ဘေးက ဘတ္တရီဆိုလား..အိတ်ဆိုင်က ဂတ်စ် အိုးဆိုလား ပေါက်တာပါတဲ့..
ရန်ကုန် မြို့ကျော်တံတား မြိ့ နယ်၊ ဗိုလ်အောင် ကျော်လမ်း အာလာဒင် အပန်းဖြေ ဆော့
ကစားမှုနေရာ ဉ် ဗုံး တွေ့ ရှိ သည် ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် အာဏာပိုင်များ က ထို နေရာ
တစ်ဝိုက်နှစ်နာရီ ကျော်ကြာ ပိတ်ဆို့ ရှာ ဖွေ ရာ အသဲ ပုံ ဖြင့် ဒီဇိုင်း လုပ်ထားသည့်
ချစ်မေတ္တာ ဘွဲ့ မှတ်တမ်း များ ဖြင့် လူလတ် ပိုင်း အရွယ် ကောင်လေး က သူ နှင့် အမြဲတမ်း ထိုနေရာတွင်ဆုံတွေ့ နေသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ကို စောင့်စားရင်း ကျန် ရှိ ခဲ့
သည့် လက်ဆောင်၊ ဓာတ်ပုံ အယ်(လ)ဘမ် နှင့် ရည်းစား စာ ကို ဗုံး ဟု ထင်မှတ် ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းတွင် နေထိုင် သည့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ် ရေး တစ်ဦး က FNG သို့ ပြောသည် ။
ကြားမိလိုက်ရင် ငိုရမလို.ရီရမလို ဟာတွေပါပဲ..
တစ်ခုခုကြားရင် သေချာမစူးစမ်းဘဲ ၀ရုန်းသုံးကားဖြစ်ရင်
အဲ့ဒီ ဖြစ်ပျက်ပုံကို video ရိုက်ပြီး net ပေါ်ကို ကို jokes အနေနဲ့တင်ပေးလိုက် လျှင် တော်တော် ရယ်ဖို့ကောင်းမှာ။
ကလေးတွေ နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့…တကယ်ဗုံးဆိုတော့ … လူတွေ မယုံတော့ရင် ခက်မယ်… ။
ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ အာလာဒင်မှာတွေ့တာ နာရီတလုံးရယ် ဓါတ်ခဲရယ်တဲ့။ အဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့ သူတယောက် က ခဏဆိုပြီး ၀န်ထမ်းလေးတွေကို အပ်သွားတာလို့ရေးကြတယ်။
အဲဒီနေ့ က အနော်တို့လည်း အိမ်က ညီမအငယ်ဆုံး ရဲ့ ကျောင်းကို တောင် သွားခေါ်တော့မလို့
နောက်မှ မဟုတ်ဘူး ဆိုလို့ အတော် နောက်တဲ့ ကလေးတွေ..
ကျနော်တို.6တန်းနှစ်ကကျောင်းသားဘ၀ကိုတောင် ပြန်သတိရတယ်
ဆရာတွေက ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. မူးမြစ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို.ရဲ. နောက်က ကျောင်းသားတွေ
စီးလာတဲ. စက်လှေမှောက်လို.ဆိုပြီး ပြောတာ ဆရာတွေအကုန်လိုက်သွားတာ ကိုယ်တွေစာမသင်ရလို.
ပျော်နေကြတာ ပြန်လာမှ ဆော်လိုက်တာ ငှက်ပျောသီး နဲ.နယ်ယူရတယ် ကြိမ်အစင်းတွေကို။
ကျွန်တော်တို.ကသူများရွာကျောင်းသွားတက်တာမို. မူးမြစ်ကို ကူးရပါသည်
တပ်မတော် ပြခန်းမှာ ပြပွဲ ရှိတော့ ၀ယ်နေကျ ဆီ ဆိုင်က သတင်းစာထဲမှာ ကြေညာ ထားတယ် ၅ပိဿ ၀ယ်ရင် အဲဒီမှာတင် ချက်ချင်း လက်ဆောင်ပေးမယ်။ အိမ်က ပုံးအလွတ်ဆွဲပြီး စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကို ဖြတ်ဝင်တော့ အမ ဘာပါသေးလဲ မေးတော့ ဗုံး ပါတယ် လို့ ပြောလိုက်လို့.. ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လုပ်နေလို့.. ဒီ ပုံး ကို ပြောတာ ဆီပုံး လှဲပြီး လက်ဆောင် ထုတ်မလို့ ဆိုပြီး ပြောခဲ့သေးတယ်။
သူတို့က ပြုံးစိစိ နဲ့ အမ ရယ် မနောက်ပါနဲ့တဲ့။
အလကား မမဆူးလား အဲ.လိုပြောရဲမှာ:P
မယုံဘူးလား.. အိမ်ရှေ့မှာ လာ ချ ထားခဲ့မယ်။ ရိုးရိုးဗုံး မဟုတ်ဘူး မိုင်းဗုံးနော်.. ခွေးထွက်ကျောင်းတဲ့ အခါ သူကို အဲဒီ အရှေ့မှာ အကြောလျော့ခိုင်းလိုက်မယ်။ နောက်မှ အဆိုးမဆို နဲ့.. ဟဲဟဲ..